Caymiska Qoraalka - Caymiska Caafimaadka Maxalliga ah ee Gobolka Washington - CHPW
Bogga ugu weyn > Xarunta Xubinta > Kheyraadka Xubinta > Qorshahaaga iyo Daboolidaada > Caymiska Qoraalka
Baro fursadaha caymiska dawooyinka laguu qoray ee loo maro Qorshaha Caafimaadka Bulshada ee Washington.
Daboolista dawada ee adiga ku shaqeysa
Boggaan, waxaad ka heli doontaa Qorshaha Caafimaadka Bulshada ee Washington (CHPW) ee liiska dawooyinka la daboolay (qaabka rasmiga ah), buuga farmasiga ee shabakadaha, iyo macluumaadka ku saabsan sida si badbaado leh, la isku halleyn karo, iyo si habboon loogu isticmaalo faa'iidooyinka daawaynta.
Waxa aan daboolno
CHPW iyo Apple Health (Medicaid) waxay daboolaan daawooyinka ku salaysan sayniska caafimaadka iyo baahiyaha xubnahayaga. Waxaad ka heli doontaa liiska buuxa ee daawooyinka aanu daboolno liiskayaga caanaha.
Dawooyinka daboolan (sida caadiga ah)
Liiska dawooyinka dhakhtarku qoray waa liiska dawooyinka dhakhtarku qoray ee daboolan. Adeegso aaladda raadinta onlaynka ah ama soo deji qaab-dhismeedka PDF:
Raadi noo online formulary
Download buug-gacmeedka PDF
Si aad u codsato nuqul adag oo bilaash ah oo ku saabsan qorista, fadlan wac Adeegga Macaamiisha ee 1-800-440-1561 (TTY Relay: Garaac 711), laga bilaabo 8 subaxnimo ilaa 5 galabnimo, Isniinta ilaa Jimcaha. Waxaan kuu soo diri doonaa nuqul 5 maalmood oo shaqo gudahood markii aad codsato.
Tallaallada Pfizer BioNTech, Moderna, iyo Johnson & Johnson COVID-19 ayaa lagu daboolay qeyb ka mid ah waxtarka daawada CHPW meel kasta oo la bixiyo.
Baro wax badan oo ku saabsan tallaalada COVID-19, u qalmida iyo goobaha
CHPW waxay leedahay shabakad ballaaran oo farmashiyeyaal ah oo ku baahsan Washington, Oregon, iyo Idaho. Qaar badan oo ka mid ah Xarumaha Caafimaadka Bulshada waxay leeyihiin farmashiyeyaal iyaga u gaar ah, sidoo kale.
Raadi farmashiyaha kuugu dhow:
Download our 2022 Tusaha Farmashiyaha PDF
Log in u dir akoonkaaga Express Scripts si aad online uga raadiso
Keen kaarkaaga Aqoonsiga CHPW markaad qaadanayso dawadaada. Haddii aadan haysan kaarkaaga, waxaad ka gali kartaa koontadaada myCHPW si aad u daawato, u soo dejiso, ugana daabacato nuqul ka mid ah.
* Wada-hawlgalayaasha CHPW ee leh Scrip Scripts si ay kuu siiyaan marin shabakad weyn oo farmashiyeyaal ah iyo noocyo badan oo daawooyin cayiman ah. Tag Express Scripts si aad u gasho ama u sameysato koonto. Koontadaada, waad ka maamuli kartaa rijeetooyinka, waxaad ka raadin kartaa farmasiyada, waxaadna ka baran kartaa macluumaadka muhiimka ah ee badbaadada ee ku saabsan daawadaada.
Haddii aad u baahan tahay caawimaad raadinta farmashiye ama aad qabtid su'aalo ku saabsan shabakadeena farmasiga, fadlan wac Adeegga Macaamiisha ee 1-800-440-1561 (TTY Relay: Garaac 711), laga bilaabo 8 subaxnimo ilaa 5 galabnimo, Isniinta ilaa Jimcaha.
Daawooyinka gaarka ah, sahayda 90-maalmood, safarka, iyo ka-hortagga uurka
Qaado Bixin Balaadhan oo Daawooyin Xul ah
Daboolka CHPW Alaabada 90-maalin inta badan daawooyinka raaga. Weydiiso dhakhtarkaaga ama farmashiistaha in 90 maalmood lagaa siiyo daawooyinkaaga booqashadaada soo socota.
Dawooyinka qaaska ah
Qaar ka mid ah cudurada isku dhafan ama daba dheeraada waxay u baahan yihiin dawooyin qaas ah oo farmashiyeyaasha caadiga ah ee CHPW aysan bixin. Daawooyinka takhasuska leh ayaa la daboolaa marka la bixinayo Farmashiyaha Gaarka ah ee Accredo ama farmashiyaasha kaqeybgala Xarunta Caafimaadka Bulshada. Hubi qaabkeena dawadaada qaaska ah waydii xarunta caafimaadka bulshada ee xaafadaada hadii farmashiyahoodu daawada kuu keenayo.
Raadi Xarunta Caafimaadka Bulshada ee kuugu dhow
Haddii aad u safreyso meel ka baxsan aagga caymiskayaga, fadlan nala soo xidhiidh. Badanaa, daawooyinka lagu buuxiyo banaanka shabakadeena lama daboolo. Farmashiyaashu waxay bixin karaan ilaa 72 saacadood oo daawo ah xaalad degdeg ah.
Ka hortaga uurka degdega ah
Kiniiniyada degdega ah waa hab aamin ah oo wax ku ool ah oo looga hortago uurka. Sida ugu dhakhsaha badan ee loo isticmaalo galmada ka dib, sida ugu fiican ayay u shaqeyn doonaan. Waa la isticmaali karaa ilaa 120 saacadood (5 maalmood) ka dib galmada aan la ilaalin. Kiniiniyada ka hortagga uurka degdega ah waxaa laga heli karaa farmasiiyada badankood ee gobolka Washington iyagoon warqad dhakhtar qorin waxaana laga heli karaa rugaha caafimaadka, xafiisyada dhakhaatiirta, ama khadka tooska ah.
Waraaqaha daawada laguugu soo diro gurigaaga
Ka dalbo daawoyinkaga Farmashiyaha Costco si habboon loogu soo diro boostada.
Sida loo bilaabo Costco Farmashiyaha
Waxaa jira seddex qaab oo aad ku sameyn karto bixinta guriga ee daawooyinka laguu qoro.
Wac: Dial 1-800-607-6861 iyo Costco waxay ku dhejin doontaa astaantaada taleefanka waxayna ku ridi doontaa daawooyinka laguu qoray nidaamkooda.
Mail: Buuxi Foomka Amarka Takhtarka. U dir warqada daawada ee asalka ah ee foomka ah iyo Foomka Amarka cinwaanka ku yaal foomka.
La hadal dhakhtarkaaga ku qoro: Weydiiso dhakhtarka kuu qoro inuu kuugu soo qoro daawooyinkaaga ama fakiska ku yaal Foomka Amarka Takhtarka.
Sida dib loogu buuxiyo daawada laguu qoray Costco Farmashiyaha
Wac: Dial 1-800-607-6861 oo raac dardargelinta otomaatiga ah.
Mail: U soo dir magacaaga, RX BIN Number (eeg kaarkaaga aqoonsiga ee daawada lagu qoro), iyo lambarka taleefanka ee:
Farmashiyaha Amarka Boostada Costco
Fax: U soo dir magacaaga, RX BIN Number (eeg kaarkaaga aqoonsiga ee daawada lagu qoro), iyo lambarka taleefanka: 1-877-258-9584
Ka aqriso waxbadan oo kusaabsan barnaamijka bixinta guriga ee Costco at farmashiyaha.costco.com.
Ka dir dalabkaaga CHC
Qaar ka mid ah Xarumaha Caafimaadka Bulshada keen guriga aad ku soo qorto dawooyinkaaga. Ka hubi CHC-gaaga haddii guriga la keenayo la heli karo.
Barnaamijka Tababarka Daaweynta Shakhsiyeed
Barnaamijka Tababarka Daaweynta Shakhsi ahaaneed wuxuu caawiyaa xubnaha maamulaya in ka badan hal arrin caafimaad oo qaadanaya daawooyin badan. Waxaan iskaashi la leenahay MedWiseRx si aan u hubino in daawooyinkaagu ay si wax ku ool ah oo ammaan ah u shaqeeyaan.
Waxaad wax badan ka baran kartaa barnaamijkan adigoo booqanaya Websaydhka MedWiseRx ama wacayo 1-844-866-3730.
Daawooyinka qaarkood waxay u baahan yihiin oggolaansho hore. Tan macnaheedu waa in CHPW ay tahay inay oggolaato caymiska ka hor intaanan kaa caawin karin inaad iska bixiso. Hubi in daawadaadu u baahan tahay oggolaansho hore ama ay leedahay wax xaddidaadyo caymis ah iyadoo wacaya Adeegga Macaamiisha ama hubinta kaayaga liiska dawooyinka la daboolay (formulary).
Waxaad soo gudbin kartaa codsi ku saabsan dib u eegista go'aaminta caymiska adoo soo diraya a Foomka Codsiga Go'aaminta Caymiska ama buuxinta foomka online.
Rijeetooyinka aan la daboolin
Haddii aad u baahan tahay dawo aan ku jirin liistadayada, waxaad codsan kartaa dib-u-eegis lagu ogaanayo caymiska Adeegga macaamiisha.
Haddii caymiskaaga uu diido Express Scripts, waxaad rafcaan uga qaadan kartaa go'aanka CHPW. Akhriso sida rafcaan loo qaato ama loo xareeyo cabasho.
Haddii aad ka bixisay qiimo buuxa warqad dhakhtar oo aad ku iibsatay farmashiyaha tafaariiqda, waxaad weydiisan kartaa magdhow. Hubi liiska dawooyinka si aad u hubiso inaysan jirin wax xaddidaad ah oo ku saabsan daawadaada ka hor intaadan dalban in laguu soo celiyo. Buuxi a foomka magdhowga ama fakis ama boostada ugu dir Qoraallada Degdegga ah.
Waxaan raacnaa sharciyada federaalka ee dejinaya heerar si loo damaanad qaado adeegyada farmashiyaha ee badbaadada iyo wax ku oolka ah. Waxaad xaq u leedahay inaad ogaato adeegyada farmashiyaha ee qorshahaagu daboolayo. Haddii aad jeclaan lahayd macluumaad dheeri ah ama nuqul ah caymiskayaga caymiska ama waxtarrada, waxaad:
Ka hubi caymiskaaga buugga faa iidada xubinta
Kala xiriir Qorshaha Caafimaadka Bulshada ee Adeegga Macaamiisha Washington taleefan ahaan 1-800-440-1561 (TTY Relay: Garaac 711), laga bilaabo 8 subaxnimo ilaa 5 galabnimo, Isniinta ilaa Jimcaha, ama emayl ahaan [emailka waa la ilaaliyay]
La soco dawada: Soo dejiso liiska daawooyinka. Qor daawadaada, waxyaabaha aad ku kaceyso, iyo waxyaabaha aad iska soo iibsato. Liiska la imow dhammaan ballamahaaga.
Daawada la xasuusto: Haddii daawada laguu xasuusto, la xiriir adeeg bixiyaha kuu qoray isla markiiba. Ha u sii wadin qaadashada dawada laguu soo celiyey. Hubi daawooyinka ugu dambeeyay ee dib loo soo celiyo.
Caawi joojinta khayaanada: Waxaan kaqeyb qaadanaa kormeerka khayaanada iyo xadgudubka farmashiyaha. Haddii aad ka shakisan tahay si xun u isticmaalka ama isticmaalka badan ee daawooyinka, wac Adeegga Macaamiisha.
Fahmaan daawooyinka laguu qoray: Express Scripts waxay bixisaa macluumaadka badbaadada ee ku saabsan dawooyinka aad qaadatay, oo ay ku jiraan waxyeelooyinka suurtagalka ah iyo isdhexgalka daroogada ee waxyeelada leh Gal gal Express Scripts ama abuur koonto.
Taariikhda Ugu Dambeysa ee Cusboonaysiinta: May 2, 2022